Akhri: Sheekh Cusmaan Xidig oo tababar aqooneed usoo xiray ilaa 200 Macalimiin dugsi Quraan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Waxaa shalay magaalada Muqdisho lagu soo gebagebeeyey tababar loo qabtay in ka badan 200 Macalin Dugsi Qur’aan, kuwaasoo ka kala yimid gobollada dalka Soomaaliya.
Tababarkaan waxaa qabsoomidiisa si weyn uga shaqeeyey Sheekh Cusmaan Sheekh Cumar (Xidig), waxaana casharro ka bixiyey culmo Soomaaliyeed oo caan ah, sida Sheekh Maxamuud Aw Cabdulle Cariif, Sheekh Abuukar Xasan Maalin iyo culumo kale.
Waxaa munaasabadii gebegebada ka hadlay Macalimiin ka kala yimid Kenya, gobollada dhexe ee Soomaaliya, Hargeysa iyo meelo kale, kuwaasoo dhamaantood sheegay iney si weyn uga faa’iideysteen tababarka aqoon kororsiga ah.
Gebagebadii tababarkaas oo uu barbar socday shirweyne ay yeesheen Macallimiinta ku mideysan Dalladda Ansaaurl Qur’aan Alkariim ayaa waxaa kasoo qeybgalay wasiir ku xigeenka arrimaha diinta iyo Awqaafta Soomaaliy Yuusuf Xeyle iyo gudoomiyaasha degmooyinka Kaaraan, Axmed Xasan Yalaxow iyo Boondheere Qaasim Cabdulle Xasan.
Wasiirka ku xigeenka Arrimaha Diinta iyo Awqaafta, Yuusuf Xeyle oo ka hadlay munaasabadda ayaa ballan qaaday in wasaaraddu shahaado aqoonsi ah siin doonto dallada ay ku mideysan yihiin Macallimiinta Ansaarul Qur’aan Alkariim.
Haddaba gebagebadii shirweynaha iyo tababarka waxaa laga soo saaray warmurtiyeedka hoos ku qoran:-
Shirweynaha Dallada Ansaarul Qur’aan Alkariim
Kadib diyaargarow qaatay ku dhawaad 6 bilood, waxaa intii u dhaxeysay 24-26 December 2014, kuna beegan 1-3 Rabiicul Awadal magaalada Muqdisho ku qabsoomay Shirweynaha Dalladda Ansarul Qur’aan Alkariim ee taabacsan Jamaacada Sheekh Daa’ud.
Shirweynaha oo cinwaan looga dhigay “”خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه ayaa waxaa qabsoomiddiisa suurageliyey Sheekh Cusmaan Sheekh Cumar Sheekh Daa’ud (Xidig), waxaana ka qeybgalay ku dhawaad 200 oo ka tirsan Macallimiinta Dugsiyada Qur’aanka Kariimka ah, kuwaasoo ka kala yimid gobolada kala duwan ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. Sidoo kale, waxaa shiweynaha ka qeybgalay matri lagu casumay.
Intii shirweynuhu socday waxaa la qabtay tabaro aqooneed oo lagu bixiyey muxaaradooyin diini, kuwaasoo lagu kobcinayey waoodda aqooneed iyo xirfadda macallimiinta Dugsiyada Qur’aanka Kariimka ah.
Muxaadaraatka la qabtay waxaa ka mid ah:
1- In la laazimo daacada Alle iyo ku camalfalka Qur’aanka Kariimka ah.
2- Ahmiyadda uu leeyahay Tajwiidka iyo barashada Cilmiga Qiraa’aatka.
3- Tilmaamaha iyo aadaabta Macallinka wanaagsan.
4- Xulal ka mid ah siirada (Taariikhda) Rasuulka Sallallahu Caleyhi Wasallama.
5- Himada sare iyo raadka ay ku leedahay bulshada.
6- Fadliga & wanaaga cibaadada habeenkii (Qiyaamuleyl).
7- Fadliga Qur’aanka Kariimka ah.
Muxaadarooyinkaa waxaa diyaariyey qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed,
Gebagebadii shirweynaha, waxaan ka qeybgakayaashu soo saareen talooyinkan soo socda:
1- In bulshada Soomaaliyeed loogu yeero ahmiyadda uu leeyahay Qur’aamka Kariimka ah, culuumtiisa iyo muujinta darajadiisa sarreysa.
2- In la labanlaabo dedaalka lagu hormarinayo Dugsiyada Qur’aanka Kariimka ah ee Soomaaliya. Si loo weyneeyo Kitaabka Alle iyo dadka u adeega.
3- In la diyaariyo Manhaj tarbiyadeed u gaar ah ardayda dhigata dugsiyada Qur’aanka Kariimka ah, kaasoo kulminaaya Caqiidada saxda ah, Siirada Nabiga Nabadgelyo iyo Naxariis ah korkiisa ha ahaadaanee, Tafsiirka Qur’aanka, Mabaadii’da Fiqhiga Islaamka, Akhlaaqda wanaagsan iyo Taariikhda Culimada Soomaaliyeed.
4- In la joogteeyo qabashada tababarada nuucaan ah ee la siinayo Macallimiinta Dugsiyada Qur’aanka Kariimka ah si kor loogu qaado aqoontooda.
5- In la qabto shirar dheeraad ah oo looga tashanayo horumarinta Dugsiyada Qur’aanka Kariimka ah.
6- In laga shaqeeyo Iskaashiga iyo Isku xirnaanta Macallimiinta Dugsiyada Qur’aanka Kariimka ah.
7- In sanadkiiba mar tartamo Qur’aan iyo kuwa aqooneed loo qabto ardyda barata Kitaabka Alle.